Taariikhda Bollywood-ka min bilaaw ilaa dhamaad iyo marxalidihii ay soo mareen Qaybta 2-aad – Filimside.net
September 24, 2017 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 24, 2017
Kusoo dhawaada qaybta labaad maqaalkeena aan kaga hadleenay Bollywood-ka marxalidihii ay soo mareen Bollywood-ka iyo maanta heerka ay taagan yihiin.
Xiligii Dahabiga Ahaa Fanka Hindiya Soo Maray (1940 – 1960):
Kadib markii Hindiya xurnimo heleen fankoodana sare u kac xoogan ayuu sameeyay intii u dhaxeesay 40-maadkii ilaa 60-maadkii waxaa loo yaqaan xiligii dahabiga Hindiya.
Aflaantii ugu tayo wanaagsanaa ugu hadal heynta badnaa ayaa xiligaas la sameeyay tusaale ahaan waxaa ka mid ah Pyaasa(1957) iyo Kaagaz Ke Phool (1959) oo uu Director ka ahaa Guru Dutt, Awaara (1951) iyo Shree 420 (1955) oo uu Director ka ahaa Raj Kapoor iyo sidoo kale Dilip Kumar filimkiisii Aan (1952).
Aflaantaas inta badan waxay ka hadlayeen fariin ahan bulshada in diirada la saaro gaar ahaan dabaqada shaqeyso ee magaalooyinka Hindiya ku nool.
Balse wax walbo waxay isbadaleen markii Mehboob Khan uu sameeyay filimka Mother India (1957) oo ay hogaamiye ka ahayd Nargis wuxuu Boxoffice-ka ka dhigay iskoor taariikhi ah sidoo kalena ilaa haatan wuxuu ka mid yahay aflaanta Hindiya ugu caansan oo ay sameeyeen.
Mother India waxaa loo doortay inuu Hindiya u matalo abaal marinta Oscar-ka qaybta aflaanta qalaad midka ugu wanaagsan wuxuuna ka gaaray qaybihii ugu dambeeyay asigoo kaalinta sedexaad ka galay aflaanta caalamka ugu wanaagsan.
Sidoo kale hormarka fanka Hindiya waxaa sare usii qaaday filimkii Mughal-e-Azam (1960) ee Dilip Kumar hogaamiye ka ahaa kaasi oo lacago rikoor ah keenay 5 Crore oo xiligaas lala yaabay!
Filimka Gunga Jumna (1961) ee Dilip Kumar maal galiya iyo hogaamiye ka ahaa waxaa la jilay Nasir Khan oo ay ku mataleen labo walaalo ah oo mid sharciga rabo midna sharciga kasoo horjeeedo waxayna fariintaan noqotay mid 70-maadkii iyo 80-maadkii in badan siyaabo kala duwan loo sameeyo.
Atoorayaashii xiliga dahabiga Hindiya hogaanka u hayeen Bollywood-ka waxaa ka mid ahaayeen Dilip Kumar, Raj Kapoor, Dev Anand, iyo Guru Dutt, halka atirishooyinka guulaha u saaxiibka ahaa xiligaas ay ka mid ahaayeen Nargis, Vyjayanthimala, Meena Kumari, Nutan, Madhubala, Sadhana, Waheeda Rehman iyo Mala Sinha.
Sedex Super Star ayaa xiligas ugu shacbiyad balaarnaayeen waana Dilip Kumar, Raj Kapoor iyo Dev Anand mid walbana xeelad u gaar ah ayuu lahaa.
Dilip Kumar waxaa lagu tilmaami jiray aabaha murugada asigoo sameyn jiray aflaan jaceyl oo qiiro badan, halka Raj Kapoor dhanka shactirada looga dambeeyay sidoo kalen Dev Anand xarakaadka reer Galbeedka ayuu Bollywood-ka baray asigoo Hollywood-ka kasoo amaahan jiray sida loo xarakeeyo.
Dilip Kumar waxaa lagu tilmaamaa atoorihii ugu weynaa ee Hindiya soo maray maqaam ahaan heerka uu gaaray sidoo kalena shaqsiyaadka fanka xiliyo kala duwan soo galeen ee qaab jiliinkooda lala cajabay mid walbo wuxuu sheegay inuu Dilip Kumar dhiiri galin ka dhigan jiray sida Amitabh Bachchan, Naseeruddin Shah, Shah Rukh Khan iyo Nawazuddin Siddiqui.
Guru Dutt wuxuu ahaa filim sameeyee ugu wanaagsanaa xiligii dahabiga ilaa maantadana waxaana lagu doodaa Guru Dutt la’aantiisa Bollywood-ka inuusan jiri laheyn wuxuuna sameeyay aflaan Classic ah.
Guru Dutt filmadiisa dhan kuwo hirgaleen ayay ahayeen ganacsi ahaan iyo maqaam ahaan balse Pyaasa (1957) iyo Kaagaz Ke Phool (1959) waxay ku biireen liiska 100-ka filim ee ugu wanaagsan ee caalamka sameeyeen taasi oo ay soo daabacday The Times ee dalka Mareekanka laga leeyahay.
Guru Dutt filimadiisii laga dambeeyay waxaa ka mid ahaayeen Pyaasa, Kaagaz Ke Phool, Sahib Bibi Aur Ghulam and Chaudhvin Ka Chand badankooda isaga ayaa wax ka jilay wuxuuna caanimadiisa ku baahiyay Yurub meelo ka mid ah sida Jarmalka, France iyo bariga fog ee Asia gaar ahaan Ahan Japan.
La Soco Qaybta Sedexaad Taariikhda Bollywood-ka Markii Magaca Bollywood-ka Siweyn Caalamka Ugu Baahay (1970 – 1980).
Waxaa Aqrisay 1,113